यी हुन् अष्ट्रेलियामा खोजे जस्तो काम नपाउँनुका ५ कारणहरु ! - Himalayan Kangaroo
यी हुन् अष्ट्रेलियामा खोजे जस्तो काम नपाउँनुका ५ कारणहरु !
Posted by Himalayan Kangaroo | ६ पुष २०७३, बुधबार ०५:५० |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियामा डिग्री वा अध्ययन सकिसकेपछि छुट्टै उत्साहको सञ्चार हुन्छ । त्यसपछि पूरै समय काममा लाग्न पाउँनुको मज्जा वेग्लै हुन्छ । तर पढाइ सकिसकेपछि पनि राम्रो र खोजे जस्तो काम नपाएर धेरै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरु निराश भैरहेको अवस्था पनि छ । विशेष गरेर नेपाल,भारत जस्ता वहुसांस्कृतिक मुलुकबाट आएका विद्यार्थीहरु अझ बढी यस्तो समस्यामा पर्ने गरेको स्वयम् विद्यार्थीहरु नै गुनासो गर्दछन् । त्यसो त अष्ट्रेलियामा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरुमा १२.२ प्रतिशत त बेरोजगार छन् । अष्ट्रेलियाको युवा जनशक्तिको २५ प्रतिशत शरणार्थी अथवा प्रवासीहरु रहेका छन् ।
फरक भाषा र संस्कृति भएको देश वा समुदायबाट आएका युवाहरुलो पढाई सकेपनि काम पाउन निकै झण्झट भोग्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसको कारण के होला त ? धेरै जना यो प्रश्नको उत्तर जान्न चाहन्छन् । ताकि त्यसमा सुधार गरेर काम खोज्न सहज होस् ।
त्यसैले व्ज्ञिहरुको विचारमा आधारित रहेर अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई काम पाउन कठिन हुनुका ५ कारणहरुबारे यहाँ चर्चा गर्दैछौं ।
कारण नम्बर १ : अँग्रेजी भाषामा कम दक्षता हुनु
कारण नम्बर २ : अष्ट्रेलियाको श्रमबजारमा रहेको भेदभाव
कारण नम्बर ३ : कुनै पेशामा दक्षता नहुनु वा पूर्व अनुभवको कमी हुनु
कारण नम्बर ४ : अष्ट्रेलियाको सिस्टम,रोजगार क्षेत्र वा अन्यबारे कम जानकारी हुनु
कारण नम्बर ५ : सामाजिक सञ्जालको अभाव
Previousधुर्मुस सुन्तलीले तराईका मुसहर समुदायकालागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने
Nextमेलबर्नमा नेपाल फेष्टिबलमा सहभागी सुष्मा केसीलाई ग्रेसको ल्यापटप उपहार
२८ माघ २०७३, शुक्रबार ०३:३४
अष्ट्रेलिया भनेकै करियर र अवसरकालागि हो : प्रकाश पाण्डे,स्टुडेन्ट
१३ चैत्र २०७३, आईतवार ०२:४१
अष्ट्रेलिया आएका नेपाली विद्यार्थीहरु किन नराम्रो बाटोमा लाग्छन् ?
११ पुष २०७५, बुधबार ०५:०८
अष्ट्रेलियाको पीआर लिन सहयोग गर्ने ४ विषय
१२ भाद्र २०७४, सोमबार ०३:०२
दार्जिलिङमा आज लोकसभा चुनाव हुँदै